ဖူးနုသဈ: ပြျောရှငျမှု ဆိုတာ
ဖတ်ခဲ့ဖူးတာ တခုကို ပြောချင်မိပါတယ်။
ဘယ်သူရေးမှန်းတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဘာသာပြန်တဲ့သူကိုလဲ မမှတ်မိတော့ဘူး။
ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သမားရိုးကျ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ မတူတဲ့ အယူအဆတစ်ခုပေါ့။
စိတ်ချမ်းသာမှုနောက်ကို အရင် မလိုက်ပါနဲ့တဲ့။ အောင်မြင်အောင် အရင်လုပ်ပါတဲ့။
လူ့လောကီထဲ နေနေသရွေ့တော့ အဲဒီ အစီအစဉ်ဟာ ပိုပြီးမှန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အတိအကျပြောရရင် ခုချိန်ထိ မှန်တယ်လို့ ထင်နေပါတယ်။
စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာ လူ့ဘဝမှာ နည်းနည်း စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းတယ်။ လက်တွေ့ကျတာကိုသာ အရင်ရှာဖွေပါလို့ ပြောလိုဟန် ရှိပါတယ်။
တကယ့်ချမ်းသာမှုကို လိုချင်ရင်တော့ စိတ်ပုတီးနဲ့ ရိပ်ကြီးခိုဖို့ဖြစ်မှာပေါ့ :)
လောကီမှာနေသရွေ့တော့ အပြည့်အဝ မရနိုင်ဘူး။
(ဦးဦးဖျားဖျား လာနှောက်ကြည့်တာ :))
ဒါနဲ့ ခုဘာတွေလုပ်နေလဲလို့ လာမေးရင်တော့...
ဟုတ်ကဲ့ ပျော်သလို နေနေပါတယ်။ :)
ဒီမေးခွန်းက ……..မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.းဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကို ..........မသိလို့ပါ။။။ဒီလိုမျို..းဆိုတော့............မဟုတ်ပါဘူး။ ..လူအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ဘုး ခပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့သူပါသလို ဆင်းရဲတဲ့သူလဲပါပါတယ်။ …….သာမညလူတွေလည်းပါပါတယ်။
လူတွေအားလုံးဆီမှာ တစ်စုံတစ်ခုလိုနေသလို.ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းခံစားရပါတယ်။ တစ်ချို့လူတေကျတော့လဲသူတို့ဘာသာ....လို့ထင်ကြရတယ်။
စီမံကိန်းတွေဆွဲတယ်။ သူတို့ဟာသေချာမတွေးဘူး။လုပ်စရာရှိတာကိုဘဲလုပ်နေကြတယ်။ တစ်ချို့ဆိုဖယ်လာရီကားမျိုးဝယ်စီးနိုင်လာတဲ့အထိဘဲ။ သူတို့တွေက ဘဝရဲ့အဓိပါယ်ကို ဒါဘဲလို့ ထင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုဒီမေးခွန်းကို မမေးမိဘူး။လူတွေ အကုန်လုံး..ကျွန်တော်မသိဘူး။ ဒါပေမဲကမကျွန်တော်သိတာကတော့....
အဲဒါနျဲ့ကျွန်တော်က ထပ်မေးတယ်။တစ်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့အနားယူရမယ် အဲဒီအခါဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။စာရေးဆရာ စတာတွေပေါ့။
Ward verification ကော မဖြူတ်ပေးချင်ဘူးလား။
Spam bot က တစ်ချိန်လုံး ပေါက်ကရ ကွန်မန့်တွေ လာလာထည့်နေလို့ Word Verification ခဏ ပြန် On ထားတာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ လောလောဆယ်တော့ ပျော်ပါတယ်။ :)
သိပ်ပြီးဦးနှောက်မခြောက်နဲ့ ဘ၀က ခဏပါ ပျော်သလိုပဲသွား...
အိပ်မက်တွေ တော်တော်များများပျောက်ဆုံးနေတာလား မရှိတော့တာလား မသိ
ကိုယ်တို့ အမေ ဆုံးမတာကတော့ ကိုယ့်အောက်က လူတွေကို ကြည့်ပါတဲ့... အမြဲတမ်းလည်း စိတ်မချမ်းသာနိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်... အသက်လေးရလာတော့ အတွေ့အကြုံတွေ အရ သိလာတာလေ :)
ဘဝ ဆိုတာ ဒီအရာတွေ အတွက် သက်သက်ပဲလား..
very well written, not only this post but the rest as well. Keep going.
I'm happy, because I know happiness is nowhere to be found :D
(ဘယ်မှာလဲမသိ တွေ့ဖူးတာတွေ လာချရေးတာ)